Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် အသေးစားလုပ်ငန်း Laser Cutter ထုတ်လုပ်သူနှင့် အသေးစားလုပ်ငန်း Laser Cutter ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
YU WEI INDUSTRY SUPPLY CO., LTD. ၏စက်ရုံတစ်ရုံကိုတိုက်ရိုက်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါသည် အသေးစားလုပ်ငန်း Laser Cutter in Taiwan။ တည်ငြိမ်နည်းပညာ back-up နဲ့ပြီးတဲ့နောက်-ရောင်းချခြင်း၌ကောင်းသောဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကုမ္ပဏီဒေသခံကျောက်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ ပို. ပို. ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်၏အစိတ်အပိုင်းများကြသည်အောက်ပါ, ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိုးကားနိုင်ရန်ပိုမိုမော်ဒယ်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုပူဇော်ခြင်းငှါဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏။ ယခုဆက်သွယ်ရန်!
ပုံစံ - OPT-ET 1530
နောက်ဘက်ခုတင်အထူပြားကိုဂဟေဆော်သည်,split assembly structure သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လုပ်ဆောင်ရာတွင်အဆင်ပြေသည်,eccentric wheel lift တည်ဆောက်ပုံ,ဖြတ်တောက်မှုတည်ငြိမ်မှုကိုတိုးတက်စေသည်.
မူရင်းလေဆာဂျာမနီမှတင်သွင်း,တည်ဆောက်ခဲ့သည်-double water cooling တွင်,အပူစွန့်ထုတ်မှုကောင်းသည်,THK လမ်းညွှန်မီးရထားသည်မြင့်မားတိကျမှုနှင့်အနိမ့်ဆူညံသံဖြင့်.
သွေးခုန်နှုန်း:၁၅၀၀ မီလီမီတာ x ၃၀၀၀
ကြာမြင့်ချိန်:2 ပတ်လည်-ငွေချေပြီး ၄ လအကြာ
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/small-business-laser-cutter.html
အသေးစားလုပ်ငန်း Laser Cutter ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုဝယ်ပါ။ အသေးစားလုပ်ငန်း Laser Cutter ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan တွင်ရှိသောစက်ရုံ